Mar haddii uu tagay John Terry Yaa loo magaaabay kabtanka cusub ee kooxda Chelsea???? – Gool FM
Mar haddii uu tagay John Terry Yaa loo magaaabay kabtanka cusub ee kooxda Chelsea????
(Beijing) 23 Luulyo 2017. Kaddib markii uu Chelsea ka tagay kabtankoodii John Terry, tababare Antonio Conte ayaa si rasmi ah xilkaasi ugu dhiibay daafaca kale ee reer England Gary Cahill.
Daafaca dhexe ee Blues ayaa inta badan kooxda kabtan u soo ahaa kal ciyaareedkii tagay maadaama uu John Terry ahaa keyd, laakiin Cahill ayaa iminka si buuxda loogu dhiibay calaamada kabtanimada ee kooxda reer London.
Xiddiga reer England ayaa waqti guuleystay ku soo qaatay Stamford Bridge tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Bolton 2012-kii, tababare Conte ayaana aaminsan inuu laacibku muujiyay inuu xilkan heyn karo.
“Waxaan aaminsanahay inay sax tahay inuu kabtan sii ahaado Cahill, haddii uu ciyaarayo waa sax inuu kabtanka yahay,” Conte ayaa sidaa u sheegay Evening Standard.
“Sabab? Maxaa yeelay wuxuu joogay Chelsea sanado badan wuxuuna ciyaaray kulamo badan wuxuuna muujiyay dabeecado wanaagsan uu ku noqdo kabtan.”.
GOOGOOSKA: Leicester vs Liverpool 1-2, PSG vs Tottenham 2-4
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Arsenal vs Chelsea 0-3 (Blues oo ku barbaratay barbaarta Gunners)